Nay Nyo Chan: Lesson-3- Appearance
People always compliment her on her hourglass figure (whenawoman has large breasts and hips, butasmall waist) and ask her what the secret is to maintaining suchaslender waist (a thin waist).
လူတွေက သူမရဲ့ သဲနာရီပုံခန္ဓာကိုယ်ကို အမြဲတမ်း ချီးမွမ်းခမ်း ဖွင့်ကြတယ်။ (ရင်ကြီးကြီး၊ တင်ကြီးကြီး၊ ခါးသေးသေး)
အဲလို သေးသွယ်တဲ့ခါးကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ လျို့ဝှက်ချက်က ဘာလဲဆိုတာ ကို မေးကြတယ်။
upturned nose (နှာခေါင်းချွန်ချွန် အပေါ်နည်းနည်းလန်နေတဲ့နှာခေါင်း၊ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်နှာခေါင်းမျိုးကို ဆိုလို)
bearsastriking resemblance to…
She hasaround face with an upturned nose, and she actually bearsastriking resemblance (looks extremely similar) toafamous singer.
သူမက နှာခေါင်းချွန်ချွန် မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနဲ့။ ပြီးတော့ နာမည်ကြီး အဆိုတော် တစ်ယောက်နဲ့လည်း တကယ့်ကို အရမ်းတူတယ်။
Joanna could get any guy she wanted – so I was really surprised when she introduced me to her latest boyfriend, who I think is hideously ugly.
ဂျိုဟာနာက သူလိုချင်တဲ့ ဘယ်ယောင်္ကျားလေးမဆို ရနိုင်တာပဲ။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ အသစ်စက်စက် ချစ်သူလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတော့ အတော်လေးကို အံအားသင့်မိတာပေါ့။ ကျွန်မအထင် သူ့ကောင်လေးက အတော့်ကို ရုပ်ဆိုးတာပဲ။
curly, shoulder-length hair
He has curly, shoulder-length hair that looks rather unkempt
(unkempt hair = messy hair, it appears that the person doesn’t take care of their hair).
ကောင်လေးရဲ့ဆံပင်က ခုတ်ထောက်၊ ကောက်ကွေးကွေးနဲ့ အတော်ကို မသပ်မရပ်နဲ့ ရှုပ်ပွနေတာပဲ။ (unkempt hair = ဆံပင်ကို ဂရုမိစိုက်ဘဲ ထားသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ရှုပ်ပွနေသော ဆံပင်)
He hasasquare face andaruddy complexion (reddish skin). His deep-set eyes (eyes that are far back in the person’s face) are almost hidden under his bushy eyebrows (big eyebrows with lots of hair), and he sportsathick mustache andahuge, shaggy beard (a beard with lots of hair). I guess Joanna doesn’t mind his facial hair (facial hair = beard and/or mustache).
သူ့မျက်နှာက လေးထောင့်၊ အသားက နီနီ။ သူ့ရဲ့ မျက်တွင်းခွပ်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေက သူ့ရဲ့အမွေးထူထူ မျက်ခုံးမွေးတွေ အောက် ဖုံးလုနီးနီးပဲ။ သူက နုတ်ခမ်းမွေးထူထူ၊ စုတ်ဖွားဖွား ပသိုင်းမွေးနဲ့။ ကျွန်မ အထင်တော့ ဂျိုဟာနာက သူ့ကောင်လေးမျက်နှာပေါ်က အမွေးတွေကို အလေးထားပုံ မရပါဘူး။
trim his beard
His body isn’t bad – he has an athletic build (body withalot of muscles), with broad shoulders (wide shoulders) and muscular arms. If he would only trim his beard (cut his beardalittle shorter) and comb his hair, I suppose he could be considered somewhat attractive (more or less beautiful/handsome).
သူ့ကိုယ်လုံးကတော့ မဆိုးဘူး၊ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်၊ ပခုံးကျယ်ကျယ်၊ သန်မာတဲ့လက်မောင်းတွေ သူ့မှာရှိတယ်။ ပသိုင်းမွေးကိုညှိမယ်၊ ဆံပင်ဖြီးလိမ်း လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ သူက အနည်းနဲ့အများတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိလာနိုင် မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
comb / curly / deep-set / facial / medium / muscular / radiant / slender / striking / trim
1. This moisturizer will give youa__________________ complexion.
2. She hasa__________________ waist and wide hips.
3. He bearsa__________________resemblance toagood friend of mine.
4. I've never liked my __________________ hair; I wish it was straight.
5. His __________________eyes make him look very pensive.
6. I love men with __________________ hair - I think it's sexy.
7. Would you please __________________your hair? It looks like you've just gotten out of bed.
8. I’m not changing my hairstyle – I’m just gettinga__________________.
9. He hasa__________________ build - he's not particularly strong, but not especially skinny either.
10. My soccer coach has very __________________ legs.
Posted by Nay Nyo Chan at 8:30 PM